Vizrt တစ်ဦးကို Global Powerhouse ဖွဲ့စည်းမှ Newtek ဝယ်ယူ! NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - - အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ
Home » အသားပေး » Vizrt တစ်ဦးကို Global Powerhouse ဖွဲ့စည်းမှ Newtek ဝယ်ယူ!
Vizrtမီဒီယာအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက်အမြင်ဇာတ်လမ်းပြောပြ tools များ၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပေးသူ, ဝယ်ယူထားပြီး NewTekIP- အတွက်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်
based ဆော့ဖ်ဝဲ-မောင်းနှင်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းနည်းများ။ အဆိုပါဝယ်ယူထဲမှာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖန်တီး
လူတွေကသူတို့တစ်တွေစာသင်ခန်းသို့မဟုတ် A ဆင့်-1 ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဆိတ်သငယ်ဖြစ်စေ, ဗီဒီယိုကို အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြရန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီများနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် IP ကိုဗီဒီယိုအကူးအပြောင်းအတွက်မောင်းနှင်အားအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာ
NDI ®နှင့် SMPTE တစ်ခုချင်းစီကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နှင့်အတူ 2110 ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဆုံးမှအဆုံးသို့အပ်တော်မူမည်
မီဒီယာများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် software-based ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ, အားကစားအဆင့်များအားလုံးအဘို့အ Workflows,
ဖျော်ဖြေရေး, ပညာရေး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစား။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းများပေါင်းစပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကို software ကို-based ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးတွဲရူပါရုံကိုမှီအောင်လိုက်ခွင့်ပြုပါ,
"ကွန်ပျူတာနှင့်အိုင်တီ-based စနစ်များ၏အာဏာနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ မိုက်ကယ်Hallénဆိုသည်ကား, Vizrt
စီအီးအို. "ဒီပေါင်းစပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကောင်းစွာဖန်တီးမှုပေးသော turnkey စနစ်များကိုကယ်နှုတ် positioned ပါလိမ့်မည်
မည်သည့် output ကိုပလက်ဖောင်းများအတွက်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်လို့မဆိုအဖွဲ့အစည်းကအာဏာ။ "
1 ။ အဆိုပါစိုက်ပျိုးမှုများအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့လုပ်ငန်းအသွားအလာဖန်တီး complementary software ကို-based နည်းပညာ
2 ။ အားလုံးစျေးကွက်များအတွက်အိုင်ပီနည်းပညာ၏မွေးစား, တန်ခိုးတော်ကို၎င်း, အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကြီးထွားလာဖို့တစ်ဦးကအပျနှံ။
3 ။ မှထုတ်ကုန်များပိုမိုကျယ်ပြန်အစုစုကိုယူပြီးထံမှအကျိုးရှိမည်အရပ်၌ရှိတစ်ဦးကအဖိုးတန်ရုပ်သံလိုင်းကွန်ယက်
4 ။ အသစ်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ NDI protocol ကိုတီထွင်သောတောက်ပသောစိတ်ပေါင်းစပ်
template ကိုမောင်းနှင် Real-time ဂရပ်ဖစ်တီထွင်ဆန်းသစ်တီထွင်သူများ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ R & amp လိမ့်မည် D ကိုအာရုံစူးစိုက်
"ဗီဒီယိုကိုပိုမိုသုံးစွဲနိုင်စေရန်ကွန်ပျူတာများ, ဆော့ဖ်ဝဲ, နှင့်ကွန်ယက်နည်းပညာ၏အားသာချက်ယူခြင်း,
နှင့်ကိုဖန်တီးရန်ပျော်စရာအမြဲခဲ့ NewTek'' s ကိုမစ်ရှင်။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည်လမ်းပုံပြင်များတော်လှန်ခြင်းပါပြီ
"မည်သူမဆိုတစ်ဦးပြပွဲဖန်တီးဝေမျှဖို့ခွင့်ပြု, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ပြောသည်နေကြတယ် ဒေါက်တာအင်ဒရူးလက်ဝါးကပ်တိုင်သမ္မတ & amp ကလည်း,
၏ CTO NewTek. "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအနေဖြင့်အဆိုပါ tools တွေကိုဗီဒီယိုတော်လှန်ရေး-မှကလေးတွေရှိနေခြင်း
အသံလွှင့်သတင်းနှင့်အားကစား၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်စာသင်ခန်း, နည်းနည်းလိဂ်ဂိမ်းနှင့်ဝက်ဘ်ရှိုးများ, ။
ချောမွေ့စေရေးစဉ်အားလုံးစျေးကွက်များအတွက်လက်လှမ်းသောဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှု tool များ၏ဖန်တီးမှုမှကျူးလွန်ခဲ့သော
အစဉ်အလာဘရော့ဘန်းကနေ IP ကိုဗွီဒီယို၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖို့အကူးအပြောင်း။
မိုက်ကယ်Hallénလက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစိန် & amp; ၏ CEO Vizrt, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါက်တာအင်ဒရူးလက်ဝါးကပ်တိုင်လက်ရှိ
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် & amp; ၏ CTO NewTekသုတေသန & amp သမ္မတအဖြစ်အခန်းကဏ္ဍယူဆကြလိမ့်မည် ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
နှစ်ဦးစလုံးကုမ္ပဏီအတွက်တနင်္ဂနွေ 7th ဧပြီလအပေါ် NAB မှာဖောက်သည်များ, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်စာနယ်ဇင်းမှတင်ပြပါလိမ့်မည်
Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမြောက်ပိုင်းခန်းမ။ အဆိုပါ NewTek ဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဖက် event မှာစတင်မည်
5: 30 ညနေများနှင့်တစ်ဦး panel က session တစ်ခုတို့ပါဝင်သည်နှင့်အတူစကားပြော NewTek'' s ကိုဒေါက်တာအင်ဒရူးလက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်ကြိုဆိုအချိုရည်။
Vizrt သည်, ထုတ်လွှင့်မီဒီယာအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက်အမြင်ဇာတ်လမ်းပြောပြ tool များ၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်အားကစား
ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစားစက်မှုလုပ်ငန်း။ Vizrt Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်များအတွက်စျေးကွက်-defining software ကို-based ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်, ဗွီဒီယို
ပလေးအောက်, စတူဒီယိုအလိုအလျောက်, အားကစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သတင်းစာဆရာပုံပြင်ကိရိယာများ။
ကျော်သည်သုံးဘီလီယံကိုလူများကပြောသည်ပုံပြင်များစောင့်ကြည့် Vizrt နေ့စဉ်ထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာကုမ္ပဏီထံမှအပါအဝင်ဖောက်သည်
CNN က, CBS, အဖြစ် အား NBC, Fox က, ဘီဘီစီ, BSkyB, Sky Sports နှင့်အယ်လ်ဂျာဇီယာ, NDR, ZDF, စတားတီဗီ, ကွန်ယက် 18, Tencent နှင့်
ပိုပြီးအများကြီး။ Vizrt ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 500 ရုံးများအတွက် operating, 30 ကျော်န်ထမ်းတစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ကွဲပြားခြားနားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Vizrt နော်ဒစ် Capital ကိုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ VIII ကပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Vizrt လွယ်ကူသောလုပ်ဖန်တီးမှုတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။
အိုင်ပီကိုဗီဒီယိုနည်းပညာခေါင်းဆောင်အဖြစ်, NewTek ကလူကွန်ရက်စတိုင်ရုပ်မြင်သံကြားဖန်တီးလမ်းကိုပြောင်းလဲနေသည်
အကြောင်းအရာနှင့်ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူမျှဝေ။ အားကစားဖြစ်ရပ်များ, Web-based ဆွေးနွေးချက်ပြပွဲ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေရေး, စာသင်ခန်းထဲကနေ,
clients ပါဝင်သည်: New York က Giants, NBA ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်, Fox News, BBC, NHL, Nickelodeon, CBS ကရေဒီယို,
ESPN ရေဒီယို, Fox ကအားကစား, MTV, TWiT.TV, USA TODAY, အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန (DHS), အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ARPA NET နောက်ပိုင်းမှာအာကာသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (NASA က), နှင့်အမေရိကန် Fortune မဂ္ဂဇင်း 80 ထက်ပို 100% ။
NDI, TriCaster, TalkShow, 3Play, LightWave 3D နှင့်အသံလွှင့်စိတ်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်နေကြတယ် NewTek, Inc
MediaDS, LightWave, ProTek, LivePanel, LiveGraphics နှင့် ProServ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် / သို့မဟုတ်၏ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်များမှာ NewTek, Inc
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor MStar SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-04-01
ယခင်: NAB 2019 မှာ Boom ကနေ Lavaliers မှ DPA မီးမောင်းထိုးပြထားသည် Sonic တသမတ်တည်း
နောက်တစ်ခု: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ - ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရင့်ထုတ်ရန်ထုတ်လုပ်မှု